Semalt waxay bixisaa Talooyin SEO-ga ah oo aad ubaahan tahay inaad ogaato
Dhammaan istaraatiijiyadaha SEO ayaa loogu talagalay inay hagaajiyaan darajada bogga ee natiijooyinka raadinta. Istaraatijiyad kasta oo lagu guulaysto wuxuu diiradda saarayaa horumarinta website-ka kaas oo ah mid saaxiibtinimo ah mashiinka raadinta darajo algorithms, taasina waa wax ka badan ama ka yar waxa SEO ah oo dhan ku saabsan. Waxaa jira laba qaybood oo isir ah oo go'aamiya darajada bogga ah iyo kuwani waa bogga SEO-ga iyo bogga bogga ee SEO - business consulting companies in Portland. Maqaalkaan, Ivan Konovalov, oo ah Sibteem khabiir, ayaa ka wada hadli doona qodobbada SEO ee muhiimka ah iyo muhiimada ay ku leeyihiin joogitaanka online ee goobta.
On-page SEO wuxuu la xiriiraa waxyaabaha ku jira bogga aad ku xakameyn kartid. Kuwaas waxaa ka mid ah astaamaha farsamada sida tayada lambarka iyo qaab-dhismeedka bogagga shabakadda, tayada content, iyo isticmaalka-isticmaalka goobta. Marka aad bogga bogga si toos ah wax uga qabato (taas oo ah hawl fudud) maaddaama wax walbaa ku jiro gacmahaaga), fursadaha sare ee sare ayaa si weyn loo kordhiyaa. Faa'iido kale oo ah inaad ku daryeesho bogga SEO-ga ayaa ah in goobta ay ku habboon tahay wadada saxda ah ee ku guuleysiga boggaaga istaraatijiyada SEO .
tiirarka ugu muhiimsan ee bogga SEO
Halkan waxaa ku qoran qodobbada muhiimka ah ee ay tahay in diirada lagu saaro SEO si waxtar leh:
1. Rakibta farsamada ee goobta: Faahfaahin kasta oo farsamo ee goobta wuxuu u baahan yahay in la sameeyo si aad u wanaagsan si loo hubiyo in guurtida raadiyaha raadinta ay u sahlanaato inay muujiso goobta. Halkan waxaa ku qoran faahfaahin ku saabsan sidii aad u aadi lahayd:
Ku dar sadarrada caadiga ah. Waxay saameyn ku yeeshaan soo-booqdayaasha waxayna kordhiyaan qiimaha riixitaanka.
Isticmaal gaaban gaaban, sax ah, dhameystiran oo soo jiidasho leh..Taariikhdu waa in ay ku jirtaa xadka astaamaha, ka soo horjeeda tartamayaasha, oo ku dar dhammaan wixii macluumaad ah ee ku saabsan ganacsigaaga.
Sharraxaadda qoraalkaagu waa inuu si cad u sheegaa dadka isticmaalaya waxa ay ka heli doonaan bogga. Ku dar magacaaga calaamadda meta oo ku dar erayga muhiimka ah ama isku mid u dhigma si aad u hesho gurigaaga.
Hayso bog soo socota oo leh waxyaabo badan oo cinwaan ah.
2. Qodobbada tayada sare leh qiimaha ugu wanaagsan ee dhagaystayaashaaga: Markaad sameysid content si aad u geliso boggaaga, weydii sababta ay macaamiishaadu u soo booqdaan goobtaada. Waxay u badan tahay, maxaa yeelay waxay ogaadeen waxa ay raadinayaan (taasi waa qiimaha content). Qorista mihiimka aadka u wanaagsan ma noqon karto mid aad u weyn. Maadooyinkaagu waa in ay si fiican u baaraan oo ay u dejiyaan erayada muhiimka ah, waana inay noqdaan kuwo u gaar ah, wargelin iyo si sahlan loo akhriyo. Macluumaadka boggaga cajiibka ah sidoo kale waa user-friendly. Isticmaalayaasha internetka ee maanta ayaa doonaya qoraalo gaaban iyo sawirro dheeraad ah iyo fiidiyowyo. Sidaas, maskaxda ku hayso sida aad u qorsheyso sida kor loogu qaado badeecooyinkaaga iyo adeegyadaada iyada oo loo marayo mawduuca webka.
3. Waayo-aragnimada user-ka ee kharibnaanta (UX) Si loo gaaro waayo-aragnimo khaas ah, adeega internetka waa in loo qaabeeyaa loona hirgeliyaa si fudud oo loogu talagalay dadka isticmaala si ay u fahmaan una socdaan. Waxay sidoo kale u baahan tahay in ay ahaato mid deg deg ah, oo ah mobile-saaxiibtinimo iyo jawaabo. Isticmaalayaasha internetka waxay sii wadaan inay noqdaan kuwo aad u sarreeya, waxayna u egtahay kuwa macaamiisha bogga inay fahmaan isbeddelladan. Macaamiilka maanta wuxuu doonayaa in uu sito isla markiiba isla markaana mid sahlan oo loo adeegsado isticmaalka qalab mobile. Wax kasta oo ka yaryar hubaal way dhibaan khibrada user iyo hoos u dhigista qiimaha celinta hoos. Sidaa darteed, feejignaan badan ayaa loo baahan yahay in la siiyo khibrada isticmaalaha. Waa qodobka kaliya ee bogga ee SEO ee ku haya labadaba isticmaalaha iyo makiinadaha makiinada labadaba.
Marka arrimahan bogga ah ee SEO-ka ee si haboon loo daryeelo, shabakadu waxay u badan tahay inay ku guuleystaan ​​darajada sare ee natiijooyinka raadinta raadinta. Websaydhku wuxuu noqon doonaa mid aad u muuqda oo soo jiidasho leh dadka soo booqda iyo qiimaha is-beddelka, sidaas awgeed iibka iyo dakhligu wuxuu heli karaa xoojin. Sida aad u arki karto, waxaa jira sababo badan oo ku filan in lagu maalgaliyo waxyaabo badan oo ku jira bogga SEO-ga.